Soomaaliya oo Caawa laga reebay Finalka Cayaaraha K/Koleyga Afrika (Somalia 83.86 Ruwanda).
Posted by shiikha on 25/01/2013 15:44:48
Xulka Qaranka Wiilasha Kubada Koleyga Soomaaliya ayaa si qasab ah loogu reebay Cayaaraha Kubada Koleyga Afrika ee Zone V 2013, ka dib Cayaar adag oo dhex martay Somaliya iyo Ruwanda taasii oo aheyd Semefinal, isla markaana kusoo idlaatay Somalia 83 – 86 Ruwanda.Soomaaliya ayaa jibisay Score-ka gool dhalinta ee u dagsan FIBA ka dib Markii Cayaaryahan Feysal uu kaligii hal kulan dhaliyay 61-gool, taasi oo ah mucjisooyinka ka dhacay Tartanka Bariga iyo Bartamaha Africa Taariikhda inta la ogyahay.
Xulka Qaranka Soomaaliya ayaa 3dii wareeg ee Kulanka waxa ay hogaanka u haysay Xulka Ruwanda, iyadoona nasiib darro xilli ay dhamaadka Cayaarta ka harsan tahay 28-secon, tuurasho loo dhigay Xulka Soomaaliya ay shabaqa la haleeli waayeen labada gool.
Ruwanda ayaa xilli ay dhamaadka Cayaarta ka harsan tahay 28-secon waxa ay heshay 2 tuurasho, iyadoona ay usuura gashay in 2-gool ay ku hubsato Shabaqa Xulka Soomaaliya, taasi oo keentay Guul darrada soo gaartay Xulka Qaranka dalka Soomaaliya.
Cayaarta ayaa intii ay Socotay Waxaa dhaawac soo gaaray Cayaaryahan Olol oo ka jabay gacanta, taasi oo iyadana qeyb ka aheyd guul darrada soo gaartay Soomaaliya, Balse Xulka Qaranka Soomaaliya ayaa lagu wadaa in u tartamo Kaalinta 3-aad iyagoo la cayaaraya Xulka dalka Kenya oo ay horey ugu guuleysteen.
Soomaaliya ayaa Intii ay socotay Cayaaraha Kubada Koleyga Bariga iyo Bartamaha Afrika Zone V, ANC 2013 waxa ay kulankeeda koowaad 81-78 dhibcood kaga soo badisay Kenya, halka kulankii labaad 98-80 dhibcood ku dhifatay Qaranka dalka Burundi, Inkastoo Kulankoodii 3d guul darro ay la kulmeen.